Nchọpụta Akụrụngwa IT - Motadata
Maka Jiri Okwu Nchọpụta Akụrụngwa IT
Nweta visibiliti ozugbo n'ime akụrụngwa IT yana ndabere ọrụ ha
Mejuputa nchọpụta ngwa ngwa ma were Motadata ServiceOps Asset Manager kpokọta ezigbo akụrụngwa yana data ngwa ngwa.
Ihe ịma aka Nchọpụta Akụrụngwa IT
Ọbụlagodi na ala IT na-agbanwe taa, ọtụtụ ụlọ ọrụ ka na-enyocha akụ IT na mpempe akwụkwọ ma anaghị ejikwa usoro ndụ niile nke akụ IT ha. A maara ndị otu IT ka ha na-atụfu isi ozi na atụmatụ ITAM ha iji jikwaa akụ ha nke ọma site na ịzụ ahịa ruo na mkpofu. Ọzọkwa, na-eji ITAM nketa, ụlọ ọrụ IT na-ejedebe na-etinye oge na-arụpụta ihe na-agbalị ime ka ngwaahịa na ihe onwunwe dị n'otu ma na-emeso akụ na-enweghị akwụkwọ ikike na enweghị nkwado.
ego ego n'ime afọ mbụ
yana ihe dị ka 5% ego n'ime afọ ise sochirinụ maka azụmaahịa mejuputa atumatu ITAM nke ọma.
Motadata ServiceOps nwere ike inyere gị aka ibelata mmefu ego IT, nweta nnabata ikike ngwanrọ, yana belata ihe egwu nchekwa iji chekwaa ọnụ ahịa.
Motadata ServiceOps njikwa akụ maka Nchọpụta Akụrụngwa IT
Mee mkpebi dabere na data gbasara akụrụngwa IT gị
Nweta ozi ziri ezi na akụrụngwa IT dị na akụrụngwa IT gị
Chọpụta ma soro akụ niile dị na nzukọ gị iji kpakọba nghọta data wee kpalite azụmahịa na mkpebi ego na akụ.
Nweta nghọta ozugbo na akụrụngwa niile wee jiri ozi kachasị emelitere n'ofe nzukọ gị kwalite ngwa ahịa IT gị ozugbo.
Site na Motadata AIOps, jiri mmụta igwe chọpụta anomalies, nyochaa ihe kpatara ya, bulie ọnụ ahịa IT yana njikwa ọrụ IT.
Nweta visibiliti n'ime akụrụngwa ọrụ azụmaahịa wee bulie ọnụ ahịa
Site na foto zuru oke nke gburugburu IT gị, kwalite oriri akụrụngwa na mmefu.
Jikwaa ọnụ ahịa ngwa ma jikwaa oke akụrụngwa n'ofe akụrụngwa IT gị.
Gwakọta ọnụ ahịa mbelata kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị iji chọpụta uru ndekọ ego nke akụrụngwa wee hazie na ibuga amụma amụma dabere na ihe azụmahịa chọrọ.
Debe ikikere ngwanro, ozi ịzụrụ ha, ngafe, na ojiji ngwanrọ iji jikwaa mmefu IT nke ọma.
Mee ka nchekwa wee hụ nnabata
Kwado nyocha ngwa ngwa nke adịghị ike site na ịchọpụta ntụpọ kpuru isi na sistemụ enweghị nyocha.
Debe ozi a ka emelitere na ụdị sọftụwia kacha ọhụrụ, akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, na patches.
Chọpụta ngwa sọftụwia anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ nke ejighị ya na ngwaọrụ akụrụngwa na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike bụrụ ebe mgbaba ụzọ maka mwakpo cyber.
Ghọta ọnọdụ ọrụ azụmaahịa nke amamọkwa nche.
Uru Maka Nchọpụta Akụrụngwa IT
Nweta ihe nnochi anya zuru oke na nke ọhụrụ nke mpaghara akụrụngwa IT gị niile na-akpaghị aka.
Ebe nchekwa data CI
Jikwaa data CI kachasị ọhụrụ na eserese ngosi nke mmekọrịta CI na nchekwa data agbakwunyere anyị iji kwalite ọrụ ITSM dị oke mkpa yana belata ọgba aghara ọrụ.
Usoro Nchọpụta Akụrụngwa bara ụba
Mgbanwe ịhọrọ site na usoro nchọpụta akụrụngwa dị iche iche dị ka enweghị onye nnọchite anya, dabere na onye nnọchite anya, koodu mkpọchi na koodu QR dabere na mgbanwe teknụzụ chọrọ.
Motadata ServiceOps ikpo okwu na-enye ohere maka njikọta enweghị mbọ na ngwa ndị ọzọ site na REST API.
Motadata ITOps Solution na-edobe azụmaahịa Na Track
Chegharịa usoro mgbanwe netwọkụ gị - Mee ka ọ dị mfe, dị ọnụ ahịa yana ngwa ngwa
100 + Ndị Mmekọ Ọgbakọ
Kwado netwọkụ ndị ọrụ anyị na-eto eto.
2k + Ndị ahịa obi ụtọ
Ndị tụkwasịrị obi na ikike nka nka anyị iji kwalite ọrụ IT ha.
25 + Ọnụnọ obodo
Onye ọkpụkpọ zuru ụwa ọnụ na-edozi nsogbu azụmaahịa dị mgbagwoju anya site na iji teknụzụ AI.